जाजरकोटका एक वडाध्यक्षद्वारा युवकमाथि निर्घात कुटपिट, प्रहरीको रोहबरमा मिलापत्र !
सुर्खेत । जिल्लाको जुनीचाँदे गाँउपालिका २ मा बृद्ध भत्ता वितरण गर्ने क्रममा एक युवकले जाँड खाएर गाली गलौज गर्दै ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेको भन्दै वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली सहितका केही व्यक्तिहरुले स्थानीय रंगे दमाईका १५ वर्षीय छोरा सर्पे दमाई (नवीन परियार) लाई हातखुट्टा बाँधेर अमानवीय व्यवहार सहित कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको हो । विस्तृतमा
झापामा खोला तर्ने क्रममा डुब्दा एक जनाको मृत्यु
धरानमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु एक जना घाइते
मलाई कतैबाट राजीनामाको अनुरोध वा निर्देशन आएको छैनः हितेन्द्रदेव शाक्य
झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल
अन्नपूर्ण पदमार्गकाे राजश्व यस वर्षदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले लिन शुरू
पोखरा । विगत लामो समयदेखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्यापले)ले अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्रका होटेलबाट लिँदै आएको राजश्व यस आर्थिक वर्षदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले लिन शुरु गरेको छ ।
धिताेपत्र बजारमा यस साता ३९ प्रतिशत भन्दा बढी रकमकाे काराेबार
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु. एक अर्ब ३३ करोड ७३ लाख ३३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
बीस कम्पनीलाई ८ अर्बकाे साधारण शेयर बिक्रीको लागि स्वीकृति
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले चालु आवको हालसम्म कूल २० कम्पनीलाई रु. आठ अर्ब १० करोड २० लाख ९९ हजार बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ ।
तेत्तिस अर्ब बराबरकाे बाेनस शेयर दर्ता
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल १०९ कम्पनीको रु. ३३ अर्ब बराबरको बोनस शेयर दर्ता भएको छ ।
वाइड बडी विमान 'अन्नपूर्ण'ले दाेहामा साताभरी नै उडान गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ वाइड बडी विमान ‘अन्नपूर्ण’ बाट पुरानो गन्तव्य कतारको दोहामा साताभरी उडान भर्ने योजना बनाएको छ ।
पहाडको आलु तराईमा लोकप्रिय हुँदै
वीरगञ्ज । खानामा स्वादिलो तथा मिठो हुने भएकाले पहाडको आलु तराईमा लोकप्रिय हुँदै गएपछि यसको माग पनि ह्वातै बढ्को छ ।
उपत्यकाको तापक्रम एक्कसी वृद्धिः अबको तीन दिन वर्षा हुने
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा तीन दिनयता कम वर्षा भएकाले तापक्रम एक्कासि वृद्धि भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३१ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । न्यूनतम तापक्रम २० दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
चन्द्रागिरि उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा बानियाँ
काठमाडौँ । चन्द्रागिरि नगर उद्योग वाणिज्य संघको प्रथम साधारण सभाले उद्यमी राजेन्द्रविक्रम बानियाँको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
सिरहामा अवैध मदिरा बिक्री भएपछि सिलबन्दी
लहान । गैरकानूनी रुपमा मदिराको बिक्री वितरण गरिरहेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहान र प्रहरीको टोलीले सिरहाको गोलबजार– ६ स्थित परमेश्वर नायकको घरको एउटा कोठा सिलबन्दी गरेको छ ।
पुल उच्च जोखिममा भएपछि ठूलो सवारीसाधनमा रोक
महोत्तरी । महोत्तरीको औरही र गौशाला नगरपालिकाको सीमामा पर्ने जंघानदीको पुल उच्च जोखिममा भएपछि ठूलो सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ । गतसाता नदीमा आएको भीषण बाढीले पुलको पूर्वीखण्डको दायाँबायाँ छेउको माटो कटान गरिएपछि पुलबाट सवारीसाधन चलाउनमा रोक लगाइएको हो ।